Apple TV + Ayaa Wadaagaya Muuqaal Kooban Oo Laga Diyaariyey Xilliga 1aad Ee Qoraaga Ruuxa | Waxaan ka socdaa mac
Apple TV +, sida adeegyada kale ee fiidiyowga ee qulqulka ah, waxaa ka go'an waxyaabaha ay ka kooban yihiin carruurta, dadweynaha oo ah, ka dib oo dhan, waa kan haysta waqtiga ugu firaaqada badan ee lagu raaxeysto barnaamijyadan. Waxyaabaha ay carruurtu ka kooban tahay, waxaan ka helaynaa taxanaha Qoraa cirfiid, taxane ah in ayaa hadda soo ifbaxay xilli ciyaareedkiisii ​​labaad.
Si kan ugu yar uu ugu raaxeysto xilli ciyaareedkaan labaad, isagoon xusuusin iyaga waxa ay tahay taxanaha uu yahay iyo sida ay ugu riyaaqeen, kanaalka Youtube-ka ee Apple, waxay soo dhejiyeen muuqaal kooban oo ku saabsan wax kasta oo dhacay xilligii ugu horreeyay, fiidiyow in kasta oo ay ku qoran yihiin Ingiriis, haddana waxaan ku dari karnaa cinwaanno hoose si ay ugu fududaato kuwa yaryar inay xusuustaan.
In kasta oo ay run tahay in silsiladdan loogu talo galay carruurta iyo dhallinyarada, haddana waa taxane taas sifiican ayaan wax ula arki karnaa caruurteena Taasina waxay hubaal ina xusuusin doontaa filimada khiyaaliga ah ee aan u aragnay ilmo ahaan, taas oo aan aaminsanahay inay wax walba macquul yihiin.
Khabiirka cirfiidka ayaa noo sheegaya sheekada cirfiidka ka muuqda dukaanka buugaagta ee xaafada, cirfiid jilaaga ku sii deynaya jilayaasha khayaaliga ah dunida dhabta ah. Afarta dhalinyaro ee qeybta ka ah silsilada, iskuna imaada xalliyaan arrimaha sugaya in cirfiidku haysto.
Xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee taxanaha Qoraa cirfiid wuxuu ku guuleystay Abaalmarinta Emmy Awards ' barnaamijka aadka ufiican ee caruurta ama nuxurka Qoyska waxayna heleen 16 magacaabid tartamo kala duwan, in kastoo midkoodna uusan ka muhiimsaneyn Emmy barnaamijyada la baahiyo maalinta.
Xilliga koowaad wuxuu ka kooban yahay 13 qaybood oo soconaya 25 daqiiqo ku dhowaad dhammaantoodna waxay ka kooban yihiin 2 ama 3 qaybood, markaa haddii carruurteennu aad u xasilloon yihiin, uma baahnin inaan sii wadno xiran kursi ilaa saacad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple TV + wuxuu wadaagaa fiidiyow kooban oo ku saabsan xilli ciyaareedkii 1aad ee Qoraa Cirfiid The
Waxaad jeclaan doontaa bixintaan 'MacBook Air' oo leh naqshad cusub